Idabi leXesha leholide Luzuko-Ukuthenga kukaGoogle kunye neeNtengiso zeAmazon kwiQ4 | Martech Zone
Idabi leXesha leholide Luzuko-Ukuthenga kukaGoogle kunye neeNtengiso zeAmazon kwiQ4
Lwesine, ngoFebruwari 21, 2013 U-Andrew Davis
Bathi "beka imali yakho apho kukho umlomo wakho." Ewe, igama esitratweni, kwaye mhlawumbi kuzo zonke izitrato emhlabeni, kukuba iGoogle kunye neAmazon ngabenzi bemali bakho xa kufikwa kwintengiso ekwi-Intanethi. Ukuthenga kukaGoogle kunye neeNtengiso zeAmazon ngokungathandabuzekiyo zezona zinamandla kakhulu, iinjini zokuthenga ezithengiweyo ezinobunzima (CSEs) ezikhoyo. Kodwa wonke umntu uyazi ukuba. Yintoni ekunokwenzeka ukuba ayazi amanqanaba angaphantsi komhlaba e-CSE giants: Idatha eluhlaza. Iinyaniso ezityhilayo.
Yeyiphi i-CSE eyayingumdlali ophambili kwiQ4? Isicwangciso seCPC Thelekisa ukuThenga kukaGoogle kunye neMveliso yeAmazon Iintengiso esekwe kwiimetrikhi ezibalulekileyo ezinje ngezithuthi, inqanaba lokuguqulwa lilonke, kunye nexabiso eliphakathi ngonqakrazo ngalunye (CPC) Makhe sijonge.
Musa ukothuka. Ukugcwala kweAmazon akuzange kuvele nje kwi-Q3. Ngokwenyani, kwenzeka okwahlukileyo. Ukugcwala kwetrafikhi kaGoogle kwakuphezulu kakhulu kangangokuba ukugcwala kweAmazon kwakuncinci kakhulu. UGoogle uthumele i-144% ngaphezulu kwetrafikhi kubathengisi abakwi-Intanethi kuneAmazon. Iphindaphindwe kabini inani lezithuthi. Olu luphuculo olubalulekileyo kuGoogle ukusuka kwiQ4 2011.
Kwi-Q4 2012, uGoogle wathumela i-96% ngaphezulu kwezithuthi kubarhwebi kuneAmazon. Kutheni umahluko ngequbuliso? Ezinye ii-CSEs, ezinje ngeShopzilla kunye ne-Venkile.com, zifumana isaziso ngechibi elikhulu lezithuthi zikaGoogle kwaye sele ziqalisile ukubhengeza iimveliso kwiivenkile. Ophumeleleyo kwezithuthi: Ukuthenga kuGoogle.
Ixabiso lokuguqula (CR)
Apha sibona iindlela ezi-2 ezingqubanayo. Ukusukela nge-Q4 2011, iqondo lokuguqula likaGoogle lokuthenga liye lancipha ukusuka kwi-3.1% ukuya kwi-2.4% kwi-Q4 2012. Yiyo leyo ukwehla ngama-22.35% kunyaka omnye. Kwelinye icala, sineAmazon, inqanaba lotshintsho oluye lwenyuka ukusuka kwi-1.8% kwi-Q4 2011 ukuya kwi-2.8% kwi-Q4 2012. Oko a Ukunyuka kwama-57.5% ngonyaka.
Kutheni lo mahluko? Ewe okoko uGoogle watshintshela kwimodeli ye-CSE ehlawulelweyo, kuyacaca ukuba iibhidi zabarhwebi zinempembelelo enkulu kwindlela iimveliso zabathengisi ezivezwa ngayo, kwaye ngenxa yoko, amaqondo abo okuguqula. Inqanaba lotshintsho lokuphumelela: Iintengiso zeMveliso yeAmazon.
Ixabiso eliphakathi kwiCofa nganye (CPC)
Iindleko ngokucofa nganye ngumqondo omtsha kuGoogle. Batshintshele ngokusemthethweni kwimodeli ehlawulelweyo kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo ngo-Okthobha, kwaye ke sinokubona ukuba nge-Q4 2011-Q2 2012, uGoogle akanayo i-CPC ephakathi.
Nangona kunjalo, xa i-CPC yaba sisiseko sokuthenga okutsha okuhlawulelweyo kuGoogle kwi-Q3, yaqala phantsi isezantsi kuneAmazon kwaye yahlala injalo kuyo yonke i-Q4, isuka kwi-CPC ephakathi ye- $ 0.30 ukuya kwi- $ 0.31. I-avareji ye-CPC yeAmazon inyuke ngandlela ithile kunyaka ophelileyo, iqala nge $ 0.33 kwi-Q4 2011 yenyuka yaya kwi-0.41 yeedola kwi-Q4 2012. Esikubonayo apha kukuba i-CPC yomndilili kaGoogle yayingama-32.5% ngexabiso eliphantsi kuneAmazon kwiQ4 2012. Ophumeleleyo kwi-CPC: Ukuthenga kuGoogle.
Ngelixa inyani kukuba andikaze ndijonge ezinye iindlela ezibalulekileyo ezinje ngexabiso lentengiso (i-COS), ingeniso, kunye nokuphendula kweinjini, ukuThenga kuGoogle kusesisiqina apha. Kwingxelo epheleleyo (eza kukhutshwa kwi Isicwangciso seBhunga leCPC kwiveki ezayo), uGoogle uzimisile njenge-premiere CSE kwi-Q4 nangona iyinjini encinci ehlawulwayo.
Ithetha ntoni le nto kubathengisi? Isicwangciso-qhinga sakho sexesha lokuthenga ngeholide, ekufuneka ulilungiselele ngoku, kufuneka sigxile kwinxalenye enkulu ekuthengeni kuGoogle kuba yeyona nto iphikisanayo kunye nokwenza imali ngexesha leeholide.
UAndrew nguMlawuli weCandelo leNtengiso leCPC. Ekupheleni kukaSeptemba 2010, uAndrew wagqiba ukubhala iNcwadi yokuThengisa yokuThengisa yokuThengisa yokuqala ebonelela ngesishwankathelo esibanzi malunga nendlela yokuqalisa kunye nokulawula umkhankaso wokuthenga ngokuthembekileyo. Namhlanje u-Andrew uchitha ixesha lakhe elininzi ebonisana nabathengisi abaphakathi nabakhulu kwi-Intanethi kunye neearhente zentengiso ezikwi-Intanethi, kunye nokubhala nokuqondisa Isicwangciso seBhunga leCPC.
UMark kaMenzi unentlalontle phantsi komgqomo-Amanzi amaninzi eSebe, nceda!
Quintly: UkuLandelwa kweMidiya yezeNtlalontle kunye neBenmarkmarking
Feb 22, 2013 ngo-2: 40 AM
Nokuba iintengiso zikaGoogle zibonakala zingcono kwaye zitsala umdla wam, ndinayo iakhawunti yeAmazon esekwe kwaye amaxabiso ahlala engabizi kakhulu (amaxesha ama-9 kwali-10 kwinto endiyithengileyo) .. 2 ucofa kwaye iposi.
Feb 22, 2013 ngo-11: 00 AM